Ny androaniko | Febroary 2015 | 2
[Lasalasa fisainana ] 14 Febroary, 2015 21:48
Sary...mainty sy fotsy.
Aleo ny hira sy ny dikan-teny malalaka nataonay sy dadatoa google no omena toerana fa tsy asiana resa-be. Hiran'i Carmen Consoli izy ity, "In bianco e nero" [(sary) fotsy sy mainty] no lohateniny.
Mijery ny sarin’ny reniko aho
Toa sambatra ery izy, telo taona angamba izy teo
Mamihina saribakoly eo an-tratrany
Fanomezana mba tsara indrindra.
Sary tamin’ny nankalazana ny andro nahaterahany
Sary mainty sy fotsy efa vasobasoka.
Mijery ny reniko tamin'izany andro izany aho dia mahita
Ny tsikiny mitovy amin’ny ahy.
Dia mieritreritra aho,
Impiry no tsapako hoe lavitra ahy izy ?
Eritrereto hoe impiry.
Mba satriko erý ny hiresaka aminy ny momba ahy
Fara fahakeliny, manontany ny anton’ny
Fahanginana ela sy toa feno fankahalana
Sy ireo fotoana tsy nifampiraharahanay.
Nasehoko azy hoe hentitra aho
Nanana hambo sy tsy hay atonina
Ao anatiko ao toa masiaka
Fa matahotra fifanandrinana.
Mijery ny sary ny reniko aho
Toa sambatra ery izy, roa-polo taona teo angamba
Ny volo voafintina anaty sarondoha landy
Ny tian’ny endrika aseho toa zary nanjavona.
Sary maneho ny taona enimpolo,
Ny hamiranan’i Catania.
Notsongolohako an-tsakany sy an-davany dia hitako
Ny fijerinay mitovy.
Fara fahakeliny, manontany ny antony
Fara fahakeliny, manontany ny antony.
[Aingam-panahy ] 11 Febroary, 2015 17:47
Aza avela hikiky anao.
Aza avela hikiky anao ny alahelo sy hatezerana,
Raha narindriny aminao ny fo sy "trano tafo herany"[*].
Izy anie toa mbola zaza, tanora mbola erotrerony,
Marefo loatra ny fisainany, izay atolotra azy, lerany.
Mbola lavitra ny diany : havoana maro, lohasaha,
Izy mbola hatoky tena fa hoe tena lehilahy.
Izy mety koa handia ilay malama misolampy,
Efa nahalavo anao fony revon-drantiranty.
Ka tohizo, afafazo amin’ny làlana ombany,
Ny fitiavanao azy, na tsy tsapany aza izany.
Izy mbola ho matoy, izy koa mbola ho ray,
Izao ratranao izao, hotsaroany amin’izay.
Eny, matezà ny aina, tongava soa ilay andro iray,
Ho fahasambarako ihany koa ilay ianao hitsiky indray.
[*] : facebook
[Ankapobeny ] 10 Febroary, 2015 21:39
efa nahavita torapo lahatsoratra aho teo an
Tsara lay mi-red red mitoraka blaogy fa hay moa ikalamako efa kobon'ny pokona dia navy dia wine.
Aleo izany avy dia ilay hira no apetraka e - hisy hahatsiarovanao ♫ ♫, ozy Jerôme Randria
[Fahatsiarovana ] 09 Febroary, 2015 02:11
Ho solon-mofomamy...Tsiaro hatrany hatrany.
Teto no nifankahalalantsika, dia eto koa no ahatsiarovako an-drý manokana androany : Bôversera Shoan !
Tsisy mofomamy, tsisy labozia 55 fa tsiahy ireo fotoana mamintsika faramparany.
Dia bizoroka be no mameno azy